Amandla aVukileyo ukubonelela nge-20MW yeemodyuli ezingama-500W kwi-Tokai Engineering ese-Malaysia, emele i-odolo yokuqala yehlabathi yeemodyuli ezinamandla ngakumbi
I-Risen Energy Co, Ltd. kutsha nje i-inki ikhontrakthi yokusebenzisana ne-Shah Alam, eMalaysia esekwe kwiTokai Engineering (M) Sdn. Ngaphantsi kwesivumelwano, inkampani yaseTshayina iya kubonelela nge-20MW yeemodyuli ze-PV ezisebenza ngokukuko kwifemi yaseMalawi. Imele iodolo yokuqala yehlabathi yeemodyuli ezingama-500W kunye nomnye umzekelo wobunkokeli bamandla aVukileyo ngexesha le-PV 5.0.
Ngeminyaka engama-27 yamava, uTokai uye waba ngumtyali mali wezisombululo zelanga ngenxa yesisombululo sayo esibanzi, esenziwe ngokwezifiso kunye nomgangatho ophezulu. Njengovulindlela ophehlelela iimodyuli zokuqala ezingama-500W ezisebenza ngokusemgangathweni, Amandla aVukileyo aya kubonelela ngeemodyuli zisebenzisa i-G12 (210mm) monocrystalline silicon wafer to Tokai. Iimodyuli zinokunciphisa umlinganiso we-system (BOS) nge-9.6% kunye nexabiso lamanqanaba amandla (i-LCOE) nge-6%, ngelixa inyusa umgca omnye nge-30%.
Ethetha ngentsebenziswano, umphathi weQela leTokai uDato 'Ir. UJimmy Lim Lai Ho uthe: "Amandla aVukileyo akhokela eli shishini ekwamkeleni ixesha le-PV 5.0 ngeemodyuli ze-500W ezisebenza ngokusezingeni eliphezulu ezisekwe kubuchwephesha obunqabileyo. Siyavuya kakhulu ukungena kule ntsebenziswano naMandla aVukileyo kwaye silindele ukuhanjiswa nokumiliselwa kweemodyuli ngokukhawuleza ngenjongo yokufumana ixabiso elisezantsi lombane kunye nenqanaba eliphezulu lemali engenayo evela kumandla avelisiweyo. ”
Umlawuli wezentengiso weRisen Energy u-Leon Chuang uthe, “Kuyasivuyisa kakhulu ukukwazi ukubonelela iTokai ngeemodyuli ezikwi-500W ezisebenza ngokukuko. Njengomboneleli wokuqala weemodyuli ezingama-500W, siqinisekile kwaye sinobuchule bokukhokela kwixesha le-PV 5.0. Siza kuhlala sizimisele kwindlela ye-R & D ejolise kwixabiso eliphantsi, iimveliso ezisebenza kakuhle kunye nezisombululo ezihlangabezana neemfuno zentengiso. Sijonge phambili ekusebenzisaneni namaqabane amaninzi ukunceda ishishini le-PV lamkele ixesha elitsha leemodyuli ezivelisa imveliso. ”
Qhagamshela kwi-https: //en.risenenergy.com/index.php?c=show&id=576